Golaha Wasiirrada Masar oo la Dhaariyay.
Madaxweynaha KMG Masar Cadli Mansour ayaa dhaariyay 35 wasiiro oo noqonaya golaha wasiirada ee xukuumadda cusub ee Masar oo ay ku jiraan 3 dumar ah. Islaamiyiinta ayaan ka mid ahayn golahan wasiirrada.
Ra’iisul-wasaare XAzem el-Beblawi ayaa hoggaaminaya xukuumaddan cusub oo noqonaysa tii ugu horreysay tan iyo markii militariga Masar ay xilkii ka tureen madaxweynihii hore Maxamed Morsi.
Wasiiraddan ayaa wacad ku maray inay difaacayaan dastuurka Masar.
Gen. Cabdel-Fatah el-Sisi oo ah madaxa ciidamada ayaa sii ahaanaya wasiirka difaaca oo uu horey u ugu magacaabay Morsi, waxaana sidoo kale uu noqonayaa ra’iisul-wasaare kuxigeenka koowaad. Sidoo kale, Maxamed Ibrahim ayaa sii haynaya xilka wasiirka arrimaha gudaha oo uu horey ugu magacaabay Morsi, halka wasiirka arrimaha dibedda uu noqonayo Nabil Fahmy oo soo noqday safiirka Masar u fadhiya Maraykanka.
Golaha wasiiradda kuma jiraan cid ka tirsan ururadda Islaamiyiinta. Ururka Ahkwaan Muslimiin oo uu ka tirsanaa madaxweynaha xilka laga ridday ayaa xukuumadda ku tilmaamay inay tahay mid “sharci darro ah” waxayna sheegeen inaysan ka mid noqonayn xukuumadda xitaa haddii lagu casuumi lahaa inay ka qeybgalaan.
Dhaarinta golaha wasiiradda ayaa imanaysa maalin kadib markii ay dhaceen rabshado dhexmaray ciidamada booliska iyo taageerayaasha madaxweynihii hore ee Morsi, waxaan ku dhintay ilaa 7 qof.